Banksy ၏ ဓာတ်ပုံ၊ နိုင်ငံတကာကိုလှုပ်ရှားစေခဲ့သော ပါရမီရှင်ပန်းချီဆရာ? - 빵야뉴스
승인 2020.12.03 18:47
[BBANGYA News | Reporter Khaing] အမည်မသိပန်းချီဆရာ Banksy ၏ ဓာတ်ပုံ၊ နိုင်ငံတကာကိုလှုပ်ရှားစေခဲ့သော ပါရမီရှင်ပန်းချီဆရာ?
[BBANGYA News | Reporter Khaing]အမည်မသိပန်းချီဆရာ Banksy၊ Sotheby's လေလံတင်ပွဲတွင် ပူဖောင်းနှင့်မိန်းကလေးပုံအား အမြင့်ဆုံးဈေးနှုန်း ၀မ် ၁.၅၅ ဘီလီယံဖြင့် ရောင်းချခဲ့ပြီး အလုပ်ကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေခဲ့သော Shredder case (2018) ကဲ့သို့သော အာရုံစိုက်မှုကိုရရှိခဲ့သည်။ "BANKSY CAPUTURED" စာအုပ်တွင် လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မှုများဖြင့် အနုပညာရှင်တစ် ဦး၏ ပုံကို ပထမဆုံးအကြိမ်ဖော်ပြခဲ့သည်။ Banksy သည် နံရံပေါ်တွင် ဖန်တီးခြင်းဖြင့် စတင်ခဲ့သည်။ Banksy ၏ အနုပညာသည် ပန်းချီကားပေါ်တွင်မဟုတ်ဘဲ သံတံတားအောက်ရှိ လိုဏ်ခေါင်းများနှင့် လမ်းများပေါ်တွင်ရေးဆွဲထားပြီး ပြသထားခြင်းဖြစ်သည်။ အမည်မသိသောပန်းချီဆရာသူသည် သတင်းအချက်အလက်စီမံခန့်ခွဲသည့် လျှို့ဝှက်ချက်၊ Banksy ကို အနုပညာရှင်တစ်ဦး အဖြစ် ဘယ်လိုသတ်မှတ်သလဲ။ သတင်းခေါင်းစဉ်သတင်းများသည် တစ်ကမ္ဘာလုံးသို့ ချက်ချင်းပျံ့နှံ့သွားသောခေတ်တွင် ဤကဲ့သို့သော အာရုံစိုက်မှုကို ခံယူနေရသော်လည်း အမည်မသိခြင်းသည် အဆန်းမဟုတ်ပါ။ ဤအချက်တစ်ခုတည်းက Banksy ၏ သတင်းအချက်အလက်စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်သည် မည်မျှကောင်းသည်ကို တွေ့နိုင်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင် သူ၏လှုပ်ရှားမှုများကို Instagram (သို့) Twitter တွင်တင်ပြီး ထိုနေ့၌ ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိမီဒီယာများက အာရုံစိုက်ခဲ့သည်။ Banksy သည် ဤထူးခြားသည့်သတင်းအချက်အလက်ပျံ့နှံ့မှုလမ်းကြောင်းကို တည်ထောင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။
သူသည် သူ၏imageကိုကောင်းစွာ စီမံခန့်ခွဲနိုင်သဖြင့် လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ပြီး ဆွဲဆောင်မှု ရှိသည်။ သူသည် ပန်းချီရေးဆွဲသူအနုပညာရှင်တစ်ဦး အနေဖြင့် အရေးပါသည်။ သို့သော် ထိုအချက်အနေနှင့် အင်တာနက်ခေတ်ရှိ သတင်းအချက်အလက်များကိုပေးပို့သူအဖြစ် ၂၁ ရာစု မီဒီယာမှ ဖန်တီးခဲ့သော ထူးခြားသောအနုပညာရှင် Banksy ၏ မွေးဖွားခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။